၁၄.၄.၂၀၁၉ – TKBC Bible
၂၁သခင်၊ သခင်ဟု ငါ့ကိုလျှောက်သောသူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်၏အလိုကို ဆောင်သောသူသာလျှင် ဝင်ရလိမ့်မည်။ ၂၂ထိုနေ့၌ကား၊ သခင်၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့် ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီ မဟုတ် လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့် နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်ပါပြီ မဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့် များစွာသော တန်ခိုးတို့ကို ပြပါပြီမဟုတ်လောဟု အများသော သူတို့သည် လျှောက်ကြလိမ့်မည်။ ၂၃ထိုသို့လျှောက်ကြသောအခါ သင်တို့ကို ငါအလျင်းမသိ၊ အဓမ္မအမှုကို ပြုသောသူတို့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ်ကြဟု ထိုသူတို့အား အတည့်အလင်း ငါပြောမည်။
၂၄အကြင်သူသည် ငါဟောပြောသော ဤစကားကို ကြား၍နားထောင်၏။ ထိုသူသည် ကျောက်ပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်သော ပညာရှိနှင့် တူကြောင်းကို ငါပုံပြမည်။ ၂၅မိုဃ်းရွာ၍ ရေစီးသည်နှင့် လေလာ၍ ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသော်၊ ကျောက်ပေါ်မှာ တည်သော ကြောင့် မပြိုမလဲနေ၏။ ၂၆အကြင်သူသည် ငါဟောပြောသော ဤစကားကိုကြား၍ နားမထောင်ဘဲနေ၏။ ထိုသူသည် သဲပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်သော လူမိုက်နှင့်တူကြောင်းကို ငါပုံပြမည်။ ၂၇မိုဃ်းရွာ၍ ရေစီးသည်နှင့် လေလာ၍ ထိုအိမ်ကို တိုက်သောအခါ၊ ကြီးစွာသော ပြိုလဲခြင်းသို့ ရောက် လေသည်ဟုဟောတော်မူ၏။
၂၈ထိုဒေသနာတော်ကို ယေရှုဟောတော်မူသည် အဆုံး၌ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူခြင်းကို အလွန်အံ့ဩကြ၏။ ၂၉အကြောင်းမူကား၊ ကျမ်းပြုဆရာနည်းတူမဟုတ်၊ အစိုးရသော သူနည်းတူ ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။
21 ပှၤလၢအစံးဘၣ်ယၤ, ကစၢ်ဧၢ, ကစၢ်ဧၢန့ၣ်တမ့ၢ် အကလဲၤနုာ်ဆူ မူခိၣ်အဘီအမုၢ်ကိးဂၤဒဲးဘၣ်. မ့ၢ် ထဲပှၤလၢအမၤဝဲဖဲဒၣ် ယပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်အသးန့ၣ် ဧိၤလီၤ. 22 တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် ပှၤအါဂၤကစံးဘၣ်ယၤ, ကစၢ်ဧၢ, ကစၢ်ဧၢ, ပကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်လၢနမံၤ, ဒီးပဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်နါလၢနမံၤ, ဒီးပမၤတၢ်လီၤလး အါမံၤလၢနမံၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. 23 တုၤနုၤတစုယကအုၣ် ယသးလၢအီၤ, ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်သုနီတခီၣ်ဘၣ်. ပှၤလၢအမၤတၢ်အၢတၢ်သီသ့ၣ်ဧၢ, ဟးဖးဒီးယၤတက့့ၢ်.
24 မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပှၤလၢအနၢ်ဟူယကလုၢ်ယကထါ အံၤ, ဒီးတိၢ်န့ၢ်ဝဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ် ယကဒိလီၤအီၤလၢပှၤ ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ အသူၣ်ဟံၣ်လၢလၢၢ်ခိၣ် တဂၤ လီၤ. 25 ဒီးတၢ်ဟဲစူၤ, ဒီးထံလုၣ်ဘၢတၢ်, ဒီးကလံၤအူ ဘၣ်တၢ်, ဒီးဘၣ်ဝဲလၢဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတ လီၤပှီၢ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အခီၣ်ထံးသူၣ်အသး လၢလၢၢ်ခိၣ်အဂ့ၢ်လီၤ.
26 ဒီးပှၤလၢအနၢ်ဟူယကလုၢ်ယကထါအံၤ, ဒီးတတိၢ် န့ၢ်ဘၣ်ဝဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ် ယကဒိလီၤအီၤလၢပှၤဟးဂီၤဖိ လၢအသူၣ်ဟံၣ်လၢမဲးခိၣ်လီၤ. 27 ဒီးတၢ်ဟဲစူၤ, ဒီးထံလုၣ်ဘၢတၢ်, ဒီးကလံၤအူဘၣ်တၢ်, ဒီးလီၤဘၣ်ဝဲလၢ ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်, ဒီးလီၤပှီၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဒီးအလီၤပှီၢ် န့ၣ်ဒိၣ်လီၤ.
28 ဒီးတုၤယ့ၣ်ရှူးမၤဝံၤအတၢ်ကတိၤဒီး, တၢ်မၤအသး လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်န့ၣ်ပာ်အသးကမၢကမၣ်လၢအသိၣ် တၢ်သီတၢ်အဃိလီၤ.-အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သိၣ်က့ၤသီက့ၤ အီၤ ဒ်ပှၤအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်အပှၤကွဲး လံာ်တဖၣ်အသိးဘၣ်လီၤ.